Campagnolo mere wiilị ụgbọ ala? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ogwe ụgbọ ala Campagnolo - ajụjụ ndị nkịtị
Ogwe ụgbọ ala Campagnolo - ajụjụ ndị nkịtị
Campagnolo mere wiilị ụgbọ ala?
Ogigeanaghịzi arụpụta ihe ọ bụlawiilmakaụgbọ ala, ma ụlọ ọrụ ole na ole, gụnyere UK 4 GroupWheels, ka na-emepụta ihe.23 jan. Ọkt 2018
Ndị mmadụ na-echekarị ihe dị iche na wiilị alloy na wiil carbon, mana gịnị bụ ihe dị iche n’ezie? Gịnị wheelie bụ ihe dị iche nke mere na ọtụtụ anyịnya igwe na alloy wiil abịa ọkọlọtọ na n'ozuzu naanị ndị kasị oké ọnụ ụzọ anyịnya igwe na-abịa na carbon wiil nke na-ekwu na ha bụ ndị a na-ewu ewu ụdị nweta nkwalite? Akụrụngwa maka ọtụtụ igwe kwụ otu ebe eee ma ị nwere ike iburu ụzọ wiil carbon maka ihe dị ka £ 500 na $ 700 ma ọ bụrụ na ị nọ na US mana ha na-esikwa na £ 1,000 ruo £ 2,000 pụta n'ihi ụgwọ nke usoro nrụpụta ma e jiri ya tụnyere alloy alloy, n'ụzọ dị iche, aluminom rim na-adịkarị site na 100 ruo 700 pound ma ọ bụ dollar maka ụzọ dị mma, ya mere ịzụta otu eriri carbon nwere ike ịdị oke ọnụ na-atụle ịzụta. N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ị nwere ike chee echiche banyere ndiiche di n’etiti ha abụọ ịmara ka i wee nwee ike ime mkpebi kacha mma, anyị kwesịrị ime ya, mana karịa ọnụahịa, kedu ihe dị iche, ana m anụ ka ị na-ajụ ma ugbu a, ihe izizi pụtara ìhè bụ ihe ndị ahụ nke ahụ na-ama jijiji mgbe niile maka ụmụ nwoke, aka nri, ma ị maara na ọ nwere ike ọ gaghị abụ ọkwọ ụgbọala kachasị ọsọ, mana m ka nwere ike ile ngwa ngwa na nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa mana ọdịbendị alloy nwere ụkwụ na-enweghị ntụpọ na nke ahụ bụ n'ihi na ha mebiri elu ahụ ihe agba ka agbapu. Ndị na-emepụta ahụ hapụrụ ha ebe ahụ, mana nke ahụ na-agbanwe ma bụrụ ihe akaebe na enwere m ihe ngosi na ịnyịnya ígwè Hanks ndị a brek na-aghọwanye ndị na-ewu ewu na ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè na, karịa ihe niile, dị ọnụ ala karịa - ma ọ bụrụ na ịnwe wheel diski breeki ị nwere ike nweta ya na agba ọ bụla dịka braking na diski ma yabụ anaghị eyi agba ahụ na rim yana nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịnwe igwe kwụ otu ebe dị ka ọhụụ a, nwalee Max 30, mana ọ nwere ike ịbụ a niile nwa ụdị fọrọ nke nta ka nwere carbon anya nke bụ n'ezie klas, n'adịghị anya, carbon rims nwekwara ike mere Mkpa ọkụ ka kwekọrọ ekwekọ alloy rims na ihe ndị ọzọ aerodynamic n'ihi na omimi nke rim nwere ike mee ka ukwuu miri, ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ihe mkpuchi dị omimi ọ ga - abụ ihe siri ike ịkwọ ụgbọala ma eleghị anya ọ na - enweghị ahụ iru ala, ya mere carbon rim na - abịa ebe a.
Nnukwu ihe dị iche bụ ọkwa dị arọ-Al Ugwum uminium setịpụrụ ugbu a na-atụle ihe dị ka kilogram abụọ maka otu ụzọ na-enweghị taya, ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere nke a na-ekpuchi taya carbon nwere omimi, ihe mkpuchi dị ka ọhụụ a Metron 55na dị ihe dị ka 1,500 gram maka otu ụzọ na-enweghị taya, nke na-echekwa ihe dị ka ọkara kilo, mana wiilị carbon nwere ike ịmị ọkụ. Ya mere, mgbe ị nwere ụfọdụ wiil carbon kachasị elu, ha nwere ike ịdị ntakịrị ka kilogram maka otu ụzọ, nke nwere ike ọ gaghị ada ụda dị ka nke ukwuu, mana ọ ga-ahụ anya mgbe ị gbatịpụrụ ya, ọkachasị mgbe ị na - eme ngwa maka ịrịgo. Ebe wiil ahụ dị ebe ibu kachasị dị mkpa bụ oghere na ihe kpatara nke a bụ na mkpokọta ebe a nwere nnukwu oge na etiti wiil ahụ, nke pụtara na ọ bụrụ na ị mee ụkpụrụ, ị na - agbatị ọsọ ọtụtụ oru nkuku ma ọ bụ nwere kpakorita nkpoda, kasị uru wheel nwere ike ịbụ a Mkpa ọkụ rim na obere inertia, ma aluminum wiil nwere ike ịbụ oké na.
You nwere ike ịlele naanị 1300-1400 gram nke dị ọkụ, ee e, ọ bụghị ọtụtụ, mana ị nwere ike ịchekwa gram 300 ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ maka impeller dị ka ọhụụ Metron 30tubular, nke anyị na-enweghị ebe a, mana ọ bụ ezigbo a nnukwu ịchekwa, ee na nke ahụ anaghị ada ka ọtụtụ, mana mgbe ị na-azọ ụkwụ na pedals ma ọ bụ mebie mpụ nke na-eme ezigbo ihe dị iche, ee na-atọ ụtọ ugbu a, m na-agba ịnyịnya carbon na ọ bụ James ọ bụ James na-agba ịnyịnya aluminom, ọhụụ Mets nwere 55s na James nọkwasịrị na Trimack Surfy na ha abụọ dị ihe dịka otu ballpark gburugburu 1,500 gram, mana isi ihe dị iche bụ na ịlekwasị anya na mgbakwunye ahụ bụ ihe ọkụkụ n'ihi na ọ dị omimi, yabụ ọ na-agbadata na ọdịiche anyị ọzọ, aerodynamics, the kasị ukwuu Advantage n'elu carbon rim bụAerodynamik ị nwere ike họrọ maka ndị a miri emi ngalaba aerodynamic wiil dị ka Ali'sgot ebe a na dị nnọọ jidere otu draịva na otu mgbalị ngwa ngwa na m pụtara na-achọghị na ugbu a otú ọtụtụ ngwa ngwa a miri emi ngalaba impeller na-eleghị anya ma kwa ma obu ver y dabere na echiche gị, ya mere nke a abụwo ọtụtụ nyocha site n'ọtụtụ isi mmalite dị iche iche na n'ozuzu ị gaghị atụ anya na ọ ga-adị ihe dịka 30 sekọnd ịchekwaa kilomita 40 na 40 kilomita kwa elekere site na iji wiil dị omimi dị ka nke a wiil dị larịị dị ka nke a na-ada ụda nke ukwuu. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eme mgbalị iji nweta ihe aerodynamic na ngwa ngwa, mgbe ahụ jụụ wiil bụ nhọrọ ziri ezi mgbe ị na-braking.If ị na-eji rim brek, aluminum rims na-anabata ka ha nwere mma braking arụmọrụ karịa carbon rims na nke a bụ ihe nke ahụ bụ ihe pụrụ iche a na-emefe na mmiri aluminom nke na-enyekwa ikpo ọkụ ka mma karịa ikuku carbon ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ibu ma ọ bụ dọpụta brek na-agbada mgbada ugwu ga-ekwe omume de carbonate carbon, mana ndị nrụpụta emeela nke a site na ederede ederede na mmelite nke resin edozi.
Mgbe ị na - eji brek ndị a, ihe ejiri gị mee abụghị ihe dị mkpa ebe a na - eme braking niile na diski na uru ọzọ bụ ime ka Carbon rim nwere ike ịdị oke ọnụ dịka ọ dị mma iji ya enweghị ike ịbụ n'ezie rụziri, ma ọ bụghị nsogbu na anyanwụ gị na diski na-ada ezigbo mma na taya dị ka ndị a nwere ike isiri gị ike karịa ikuku ifufe na nke a bụ nsogbu ndị mmadụ na-echekarị na Coralie na-egosi gị taa n'ihi na taa bụ ụbọchị dị jụụ nke afọ. , ma agbagoro m akụkụ miri emi n'ọtụtụ ọnọdụ na enwere m ike ịsị na ọ bụghị nsogbu dị njọ dị ka ọtụtụ ndị na-eche, ọ bụkwa ihe nke emegoro nke ọma. N'iji ụdị rim nke oge a, ọ nwere ike bụrụ nsogbu karịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ọkụ dị ka m, mana m ga-aga maka igwe kwụ otu ebe ka echiche 40 millimita m nwere ebe a zuru oke na ọ dị mfe ya aerodynamics ya naanị na-eme ihe niile ee na ọ gaghị ada ada n'ofe ikuku, nke dị mma mgbe ị na-ekwu maka isi ike, gịnị banyere nke ahụ? Wheels n'ezie ee, inwe a stiif ụzọ nke wheel bụ a n'ezie mkpa àgwà see pedals na ọ bụkwa ihe mara mma na ndị ọzọ onwe-obi ike na a nwere a stiif ụzọ nke ụkwụ na nkuku, ma ọ dị mkpa na-ezo a na ọ bụ a nnukwu akwụkwọ na i nwere ike ime n'ezie stiif wiil nke aluminom ma ọ bụ carbon naanị ihe dị iche ga-abụ na aluminium wiil nwere ike ịbụ a obere arọ m na-achọghị iji ya gwuo egwu, ha kwadebere ya ihe ọmụma a. Olileanya ugbu a ị nwere ike ịhọrọ wiil nke kachasị mma maka mkpa gị ma ọ bụrụ na ịchọta na ọ bara uru, biko hapụ ya n'ihi na ọ ga-enyere ndị ọzọ aka ịchọta ya ee ma ọ bụrụ na ị na-elele isiokwu banyere ọdịiche dị n'etiti igwe igwe na carbon na carbon wee pịa ebe a
Gịnị bụ ogwe osisi Campagnolo?
Oge aCampagnolo wiildị arọ, na-adịgide adịgide ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya. Ma ị choro otu carbonwiilmaka ịgba ọsọ n'okporo ụzọ ma ọ bụ alloy siri ikewiil,Ogigeyou jirila ọtụtụ okporo ụzọ kpuchie yawiil.
Kedu ụgbọ ala ndị kachasị mma?
Họrọ onye nchịkọta akụkọ: Volk Racing TE37. Enweghi ike mezue ndepụta a na-enweghị ntinye nke TE37 a na-asọpụrụ site na Volk Racing.
American Racing Torq Nkwanye.
BBS BS Super RS.
HRE Devid agụghị ndị gbara Series 505M.
Ihe ọ bụla sitere na ADV1.
Jenụwarị 17 Dec 2019
ọzụzụ sekit maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè
na-ehi ụra na telivishọn on
You nwere ike itinye rim ụgbọ ala na gwongworo?
Car rimna-enweghị otu hà karimmaka agwongworoma ọ bụ ọtụtụ SUV.Gịnwere ike na-amasị imewe nke a set nkerim, maọ bụrụha abụghị oke nha, ha agaghị adabara gịụgbọ ala. Jide n'akagịnweta enyemaka iji tụọ gịrimna kenha a ọhụrụ ka nri size maka gịugbo ala.Ọkt 2 2019
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa? Jones na Fitment Industries, yana ị hụla, enwetara m Fuller ebe a taa, yabụ nke ahụ nwere ike ịpụta otu ihe: anyị ga-ekwu maka ngwongwo gwongworo. Ma mba, mba, mba, agahala nihi nihi na anyi n’ekwu n’otu ugbo ala. Anyị ga - atụgharị gwongworo gwongworo na wiil ụgbọ ala ma kọọrọ gị ihe kpatara ụkwụ ụgbọ ala ji dị mma nke ukwuu - Ka anyị bịakwute ya - Ya mere, Onye ọrụ zuru ezu, ị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala, ị na-arụ ọrụ na mmebi iwu, ejiri m n'aka na mmadụ niile bụ omenala offsets -Tdị ga-amata gị ebe a.
Ya mere, mgbe inwetara gwongworo ma chọọ ịzụrụ wiil ọhụrụ maka ya, ị ga-aga ebe ahụ zụọ ahịa maka ụkwụ nke mbụ nke wiil maka ụgbọala ahụ, dị ka gịnị ka ị na-achọ na wiil? - Echere m na imirikiti ndị mmadụ ọkachasị ndị ahịa anyị, ndị na-azụ ahịa na mbadamba omenala, ihe kachasị onye ọ bụla chọrọ bụ etu m ga-esi gaa ma kedu nnukwu m ga-esi bulite? Yabụ na ịchọrọ ndị wides 12, ndị wides 14 ahụ, ndị mmadụ na-eme wides iri na isii ugbu a ma ha chọrọ ịhụ etu mbuli elu ha nwere ike ime yana etu ha ga-esi wee nwee ike ịkpụkwa ụkwụ na ike ngwụcha na fenda ahụ, ihe ọkwọ ụgbọ ala bụ, gị mara na nke ahụ ga-abụ ndị bumpers dị egwu na nke ahụ abụghị ihe ha na-eche banyere ya - Aka nri - Ebe anyị nwere wiil ndị na-arapara isii na asatọ na asatọ n'èzí ndị na-agba anyị - Ya mere, ha na-ekwu na ọ bụghị ọtụtụ nhazi ahụ, ọ bụ karịa nke. - Ee, m na-ekwu, o doro anya na ndị mmadụ nwere mmasị na imewe kwa, mana m na-eche na ọtụtụ n'ime ụmụ okorobịa ahụ chọrọ inwe nnukwu dị ka o kwere mee. Nke a bụ ma eleghị anya ajụjụ kachasị ewu ewu na Instagram, yabụ ana m eme ozi akụkọ Instagram niile ma onye ọ bụla chọrọ ịma ihe kachasị aka na taya m nwere ike ịbanye na Chevy Silveradoor n'ụgbọala ọ bụla ha na-ejide na nkwusioru ọ bụla, na ị nwee.
Yabụ, ndị ọkwọ ụgbọ ala, echere m, ọ dịkwa mfe karị ma a bịa n'ihe nkwụsịtụ n'ihi na ha bụ ọkọlọtọ ma ọ bụ gbadata ala, onweghị onye buliri ụgbọ ala. - Nri. - Ma mgbe ị gbagoro n’elu, enwere ọtụtụ nhọrọ n’ihi na ọ nwere ike ịbụ sentimita abụọ, sentimita atọ, sentimita anọ, sentimita isii, sentimita itoolu, sentimita iri na abụọ, ọ dabere na ihe ịchọrọ onwe gị bụ n’ezie - you chere ya na dum size ihe, ka ọtụtụ ụgbọala wheel emepụta na-eche na-atụle wheel arọ mgbe ọ na-abịa imewe nke ha wiil? - Echeghị m na e nwere ọtụtụ ndị na-eme nke a, nke m chere na ọ na-eme ka wheel dị arọ, mana nke ahụ bụ n'ihi na m na-anya ụgbọ ala yana ya mere m maara banyere ọghọm nke unsprung mass na enwere ụfọdụ ndị chere na ha ' Aga m elekọta ya.
Anyị gara Sema, laghachi na m gwara otu n'ime ndị na-emepụta wiil ndị a mepụtara ma ha lekwasịrị anya na mbenata ibu ha na-agbakwunye na wiil ndị ahụ n'ihi na ha nwere nhọrọ maka mkpuchi billet, yabụ ọtụtụ n'ime okpomoku. uwa bu plastik, a na m eche na ugboala di otua. - Mmmm. - Ha nwekwara nhọrọ maka billet, nke ejiri ọla mee.
Yabụ ugbu a, ị na-akpụpụkwa azụ okpu a, yabụ na ọ bụ naanị oghere ma belata oke dị ka o kwere mee, mana ọ bụ sọọsọ ole na ole, ịmara? , Ihucha 24x16 nke anụ ọhịa ahụ nke dị 50 ma gbakwunye pound. - Ziri ezi. Ee, echere m na nke ahụ bụ ihe nwere ụkwụ ụgbọ ala, ọ bụrụ na ị hụ mgbasa ozi maka wiil ụgbọ ala ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ, ma ọ bụ akara na-apụta na akara ọhụrụ nke wiil, ha dị ka, oh, ha na-enweta nnukwu ọkụ, ị ga-echekwa ọtụtụ ibu na ihe niile, ọ bụ ụdị eziokwu ahụ na anyị na-eme ka anyị na-eche banyere ibu karịa ka anyị na-eme - ị maara? ndị nwere ụmụ okorobịa nwere mmasị na ya nwere ike ilekọta anya karịa ụmụ okorobịa ndị na-eme ya maka anya. - Kpamkpam. - Ya mere, mgbe m na-anya gwongworo ma na-eburu wiilị gwongworo oge niile, ọ na-ewute m nke ukwuu ịtụtụrụ ha wee zụta ụgbọ ala m na-esegharị wee nweta otu nke Cosmis 006Rs ebe ahụ ka m gara bulie wiil na taya mgbe m enwetara m ya n'ala ma ọ fọrọ nke nta ka m tụfuo ya n'ihi na ọ dị nfe ma enweghị m ike ikwenye ya, mana ee, echere m na ibu ibu dị mkpa karịa ụwa ụgbọ ala karịa ka ọ dị n'okwu ụwa.
N'ihi na ihe ndị a dị oke njọ, anyị nwere ezigbo gas agbara, ị na-eweli ya ka ha wee dị ka, ee gịnị bụ narị poun ole na ole? N’ụzọ doro anya, otu esi eme wiil ndị ahụ na-egosipụtakarị na ha dị arọ, yabụ ụkwụ nkedo gị ga-adịkarị arọ karịa wiilị gị mebiri emebi ma ọ bụ akụkụ atọ gị ma ọ bụ ihe yiri ya. You na-echepụta ya na teknụzụ na ọtụtụ igwe gwongworo? kedu usoro ị chere ọtụtụ n'ime ha ga-esi gafere? Ọ bụ ha ka na-ejikarị ma ọ bụ na-agbanyekarị y? - Ya mere, anyị na-elele ụfọdụ data na nke a ma echere m na 95% nke wiil ndị anyị nwere na weebụsaịtị anyị ka a tụbara wiil. Nke ọzọ 5% ga-abụ esorowo wiil, ma ọ bụ dị egwu iberibe nke mkpakọ ike.
Yabụ n'ime ụwa akpaaka ị nwere ntụgharị, ntụgharị, mkpakọ mkpakọ, aha ndị a niile, mana n'egwuregwu gwongworo, anyị dị ọhụụ na mkpakọ mkpakọ ọ bụla, yabụ Ax Offroad bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-eme nke ahụ na mkpakọ forging bu ihe m bu ka m ga-akowara gi nkenke. Ọ dị ka igwe nkedo nkedo mana enwere oke ọkụ na nrụgide na ntụgharị na ha na-adọta gbọmgbọm nke wiil ndị ahụ iji mee ka ihe dị mfe tinye ya ike. - Chọpụta. - Mana ee, ọ bụ naanị otu ụlọ ọrụ ugbu a na-eme ya, ọtụtụ n'ime ha ka a tụbara, na ihe anyị chọtara na wiil ndị mebiri emebi na ụwa na-ebugharị bụ na ha dị arọ dị ka a tụbara ha.
N'ezie? - Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ metụtara njupụta nke ihe ahụ, n'ihi na enwere ọtụtụ aluminom ebe ahụ ma ha jiri ya pịa ya, echefuru m ihe ọnụ ọgụgụ ahụ dị, mana ọ dị ka nrụgide nke iri puku kwuru iri ọtụtụ puku pound iji piakota ya niile ka m chee na ị nwere ngwongwo ọka ndị a na-eme nke ọma ma sie ike na ị ka ga-enweta otu. Ọ bụ ezie na ọ bụ aluminom, ọ ka dị oke arọ. - Eeh.
Ya mere, ihe ị na-ekwu bụ ma ọ bụ nkedo ma ọ bụ bụrụ ndị mepụtara na ndị na-emepụta ụgbọ ala na-amalite ịbanye na-agbanwe ma ọ bụ na-agba ọsọ? - ee enwere ụlọ ọrụ naanị otu ụlọ ọrụ - ị maara, site n'akụkụ akpaaka na-abịa? 'Nke ahụ bụ ihe ụlọ ọrụ niile na-anwa ime ugbu a - - Oh, onye ọ bụla na-enweta ya - Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe ọ bụla nwere ụgbọ ala dị ka akara ejirila zuru ezu, yabụ nke ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ n'ezie, Ọ dịghị mgbe m maara n'ezie na .- Ee, anyị ga-anọ azụ na teknụzụ a. Amaghị m ma ọ bụ n’ihi na ndị mmadụ anaghị eche banyere ibu m chere.
Ọ bụ echiche onye ọkwọ ụgbọ ala m chere - Ee. Dịka atụmatụ na ndị dị otu a, m na-ekwu, na agba m na-eche mgbe m lere n'akụkụ gị nke mgbidi wee lelee n'akụkụ anyị - nwa ahụ n'ebe ahụ - enwere agba ndị ọzọ karịa nwa na chrome na ndị dị otú ahụ? - Ọfọn ndị kasị ewu ewu imecha bụ ka nwa, nke abụọ kasị ewu ewu na-aga ịbụ nwa na milled otú ọ bụ ka ukwuu n'ime nwa na a bit nke a silver ngwoolu na ya. Ihe mkpuchi Chrome, anyị ahụbeghị nke ahụ, ọtụtụ mmadụ na-emegharị chrome na-egbu maramara, dị ka ụzọ a si agbazi ụkwụ zuru oke mgbe chrome bụ mkpuchi ma enwere PVD chrome, nke dị ka ntụ ntụ. , ma e nwere ọtụtụ Mkpa àgwà mbipụta, n'ihi ya, ndị mmadụ laghachiri na na na rapaara mgbe chrome ma ọ bụ zụta esorowo wiil wiil, n'ihi ya - Chọpụta. - Nke ahụ bụ ya.
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-apụta na a ole na ole dị iche iche na agba, anyụike ọzọ, n'ihi ya, ha bụ ndị na-pushing ókè na mkpakọ ibe ya bụrụ, ma ha na-abịa na-acha uhie uhie wiil ugbu a kwa, na ha nwere ọcha wiil nke m chere na ọ ga-abụ ibu ike iji dị ọcha ka nke a na-adọrọ mmasị. Mana enwere ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme ọhụụ gbara ọchịchịrị, yabụ na ha ga-arụ ọrụ ihu igwe wee gbasaa uwe mkpuchi ya. na nke ahụ na-aghọwanye ewu ewu.
Anyị hụrụ ihe atụ ole na ole dị iche na nke a na Sema n'afọ a, ya mere ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ihe ndị mmadụ ji ya mee, mana ka ọ kachasị bụrụ nke kachasị ewu ewu bụ nwa. - Dị ka ndị aghụghọ? Wheels, nanị na-ele ha anya echere m na ọtụtụ n'ime ha nwere ọtụtụ ihe jikọrọ, enweghị m ike ịsị na wiil ụgbọ ala ahụ adịghị ka nke ahụ, mana mgbe m hụchara, ị ga-ekwenye na m ka ị na-eme na-eche na nke ahụ bụ nke ukwuu? nke imezi ugbua nke ugbo ala ugbo ala na-amalite ịbanye n'ime wiil gwongworo? - Ee, dika ụmụ okorobịa gwongworo anaghị eme? Agaghị m ekweta na ọtụtụ ụdị anyị na-ahụ na wiil ụgbọ ala ndị a ma ama bụ ma ọ bụ na-abịa site na ụwa akpaaka, nke ahụ bụ naanị n'ihi na a na-eji ọtụtụ gwongworo dị ka ihe ngosi ma ọ bụghị otu, ị maara, nke Worklọ ọrụ na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ Ha Dịbu - O doro anya na - Ihe ahụ abụghị nke ahụ dị mkpa, onye ọ bụla na-eche na wiilị ụdị ejiji, dị ka anyị kpọrọ ha, bụ n'ụzọ nkịtị, ọ bụ naanị okirikiri ka edere n'ime nchara, ma ugbu a ị nwere ụdị aghụghọ dị mgbagwoju anya , na ọtụtụ ndị mmadụ na-eje ije ndị na ohuru gwongworo ndị na-ibu elu mma, gị Denalis na ihe ọ bụla a n'ụzọ zuru ezu kwajuru ugbu a, na ọ bụ karịa nke a okomoko ugbo ala n'ihi ya, o kwesịrị ọzọ okomoko. Stilrad.
Ma ka ọ dị ugbu a, echere m na ndị kachasị ewu ewu anyị na-ere bụ Big Blockor Moto Metal Line 962 alloy alloy nke dị mfe, ọ dị ka mmadụ asatọ ma ọ bụ isii kwuru okwu, enweghị m ike icheta nke ọma mana ọ bụ n'ụzọ nkịtị naanị? a nnukwu blocky mpempe. Ma ọ dị mfe ma dịkwa ọcha, amaghị m ihe kpatara eji ama ya, mana ọ bụ. Pesdị ụgbọ ala nwere ọtụtụ atụmatụ dị mgbagwoju anya m ga-ekwu. - Kpamkpam.
Ee, m na-ekwu, ma enwere ọtụtụ atụmatụ aghụghọ ndị ọzọ n'ebe ahụ, naanị ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-apụ apụ apụtachaghị n'ihi na ha ga-adaba n'ụgbọ ala nke ị na-enweghị ike ịtụba n'ụgbọala ma ihe m nwere ike ikwu na m hụrụ bụ ntụziaka wiil. - Ee ee.- Enwere m ike iche na ụlọ ọrụ ga-amalite ịnye ezigbo igwe kwụ otu ebe - - Aka nri - - Nke a na - eji nwayọ na - abata n'ụgbọala ahụ. - M ga - asị, enwere wiil ụgbọ ala na-eduzi mgbe ụfọdụ? - Mhm - Onweghi onye na-agha ụgbọ mmiri chọrọ ime ya n'ihi na wiil gwongworo dị oke ọnụ, n'ihi na enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ebe ahụ, dịka, ị nwere ike ịnweta usoro ụgbọ ala mara mma nke na-achọ ihe dị ka $ 600 na nsogbu ndi kwetara na Bia. - Right - Omenala Dechapụ, M ga-asị na ọtụtụ ndị na-eleghị anya na-emefu ihe karịrị $ 1000 na a n'ezie mara mma na-achọ set nke wiil.
Ihe kpatara ndị mmadụ na ụgbọala ahụ anaghị eme ka wiil na-atụgharị anya bụ n'ihi na ọnụahịa ya doro anya okpukpu abụọ n'ihi na ịchọrọ aka ekpe na aka nri, mana Arkon na-apụta ugbu a nke mepụtara site na mmebi iwu na-agbanwe agbanwe n'ụzọ dị mkpa ka anyị wee hụ otu esi mee nke ahụ. Otu ihe m chọpụtara bụ na ị nwere concave wheel maka afọ. Karịsịa ihe niile dị n'ọtụtụ akụkụ, nke enwere ike ịme kpamkpam dị iche iche, n'ihi na enweghị isi wiil dị iche iche maka gwongworo, mana m na-ekwu, gwa m maka wiilị concave, onye ọ bụla na-agba ha, ha bụ nnukwu ewu ewu? - Ee, m ga - asị na ha mara mma, ọkachasị na wiil ndị ọzọ na-agba mbọ dabara.
Kind nwere ụdị nke ahụ na ndammana, yana obere nsogbu ị na-amalite ịgba ọsọ. - Oh, na obere nsogbu gị dị ka --- Ee, obere mbibi anyị-dị ka, ka gbakwunyere 1 0, obere mbadamba anyị dị obere 101.- Ihe na-agbapụ m, ị maara.- Yabụ enwere oke Ugboro abụọ dị ka mwepu 176. - Ihe dị nzuzu banyere wiil ndị na-ebuli elu na ndị concave, na ihe ọtụtụ ụlọ ọrụ mere, ọkachasị n'egwuregwu egwuregwu atọ ahụ, emeela ngwakọta nke abụọ - Ọ dị mma - yabụ ọ bụ wheel concave, ma ha nwere okwu a enweghi ngwụcha, ọ dị ka nke a na-aga n'ihu ka ị ka na-enweta egbugbere ọnụ atọ ma ọ bụ anọ dị n'èzí, yabụ - amaghị m ma nke ahụ ọ ga-ekwe omume na ụwa ụgbọ ala n'ihi na ọ bụrụ na ị nwetara otu ụgbọala na-adọkpụ wee nweta sentimita iri na abụọ ịrụ ọrụ? na, ọ dị mfe ime a n'ezie miri emi concave wheel na ka nwere anọ nke anụ ọhịa egbugbere ọnụ na ya. - Kpọmkwem ziri ezi. - Echeghị na ọ ga - ekwe omume - Ee, obosara n’anya anyị dị ka igwe elekere iri na abụọ. - Ee, maka anyị, ọ dịka anyị na-ebido. - Dị ka echiche ụgbọ ala si Jarrods Auto, ndị a bụ ezigbo ihe atụ, ha bụ wiil atọ, ha dị oke nkpa, mana ị na-enwetakwa egbugbere ọnụ a site n'èzí - Ee, ị nwere ike idobe ha.
Anyị hụrụ 30x16 American Force na Sema. - Ọ dị mma, yabụ echere m na nke a ga-emecha ya maka taa. Mee ka anyị mara n’ihe ị chere.
Ọ bụrụ na ịchọrọ wiil, taya ma ọ bụ nkwusioru gaa na www.FitmentIndustries.com.
Ma m bụ Jones si Fitment Industries. - Na m bụ onye zuru ezu site na Offsets Omenala. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwanye ngwongwo, lelee weebụsaịtị anyị CustomOffsets.com. - Aga m ahụ gị ma emechaa. - Udo. - Udo. (Hip hop egwu)
Ebee ka a na-eme oghere ndị a na-akpọ Campagnolo?
Ogigengwaahịa bụkereke Italy, ke Vicenza.Ogigebụ naanị ụlọ ọrụ akụrụngwa na ụwa ịgba ígwè na nke nwere ngalaba imepụta nke ya, ha niile dị na Europe.
Ogige Campagnolo ọ dị mma?
IheOgigeBora WTO 60 Discwiilbụ superfast, ikenyeneke mbiet na-agba ịnyịnya na na oké ọnụ. N'agbanyeghị oke miri emi, ha na-eme ọfụma ma na-akpa ezigbo agwa ikuku. Wezugaeziagbụrụwiilị. ➥ Zụta ugbu a site na Wiggle ($ 2050.00), Chain Reaction Cycles ($ 2050.00), na ProBikeKit ($ 3244.49).07.22.2020
Ndi Savini wiil ezigbo mma?
Savinibụ onye na-eme aEluKwụsị Omenala 3 ibe esorowowiil. Ha kwesiri ibu okeogongwaahịa.Jul 27. 2011 r.
RTX ọ bụ ezigbo akara ika?
IheRim rimzụrụ n'oge na-adịbeghị anya maka ụgbọ ala m nke ọma ma mara egwu. Ha dabara nke ọma. Ha na-enye n'ezie ngosipụta-nkwalite yana abawanyetayaarụmọrụ. Onyewiillee anyaukwun'ụgbọala m.
Ihe ndị na-adọkpụ ụgbọala ndị ahụ, dị ka igwe ụgbọ ala?
Anaghị m akwado ijitrailer ụkwụmaka ugbo ala ka nke ahụ adịghị echekwa, agbanyeghị ịnwere ike ijirim motoiri aụgbọala na-adọkpụ ụgbọalaọ bụrụ na ha dabara nke ọma. Ihe iseokwu ị nwere ike ịbanye na ya bụ nke ahụugbo ala ugbo ala/rimkwesiri inwe uzo di iche iche dabere nawiilịke, ebe kachatrailer ụkwụnwee efu.18 nke 2016 Nọvemba
Onwere ihe di iche na etiti igwe na adighi anya?
Enwere m ike itinyerimble trailerna mgbe niileụgbọ ala? Azịza ọkachamara: usegbọ ala na-ejiwiilna mmebi dị elu dị elu nke na-etinyeihetaya nsoiheekunkeụgbọala na ebe ọ bụ natrailer ụkwụEzubere ka enwee efu efu kaEbe ahụbụ ọbụna zọcha iyi dị ka ha na-agbaso ibu arọ.Mar 21 2019